Caqliga badani Oo la ogaaday inuu keeno Xanuunka Wadnaha ku dhaca.
Monday July 16, 2012 - 17:36:50 in Maqaallo by Super Admin
Taqaatiir ayaa xaqiijinaysa in caqligu kaalin labaad kaga jiro cudurada wadnaha waxaa ka horeeya oo kaliya sigaar cabista.
Baaritaankaan oo ay sameeyeen taqaatiirta machadka London waxa uu sheegayaa in dadka caqliga badani unugul yihiin cudurada wadnaha halka kuwa caqligooda dhax dhaxaadka yahay ama uu yar yahay ay ka badbaadaan cudurkaas.
Sida ay sheegayso warbixin taa ka badan aya aiyana waxa ay xaqiijinaysaa in cudrkani yahay mid uu daawo u yahay Soonka,Drs. Sabaax Cammaar oo wax ka dhigta jaamacadda caafimaadka ee xilwaan oo ku taalla dalka masar ayaa dhawaan soo bandhigtey natiijada daraasado dhowr ah oo ay ku ogaaneysay faa,idooyinka caafimaad ee ku jira soonka.
dadka qaar ayaa waxa sheegaan in caqli caqliga badan uu qofka u keeni karo dhibaato ay ugu weyn tahay inuu qofkaasi noqdo qof cidlo kali wareeg ah kadib markii ay dadka oo dhami ogaadaan inuu yahay nin caqli badan iskuna daya inuu yahay mid ayaga dhan ka caqli badan taan ay dadbadani ay isku seegaan.